Chinja mavara kuti ataure. Dzimwe nzira dzeLinux | Linux Vakapindwa muropa
Chinja mavara kuti ataure. Dzimwe nzira dzeLinux
Diego ChiGerman Gonzalez | | General, Zvirongwa, Linux software
Nezvikonzero zvakasiyana siyana; kuremara, kuda kutora mukana wenguva yekufamba kana yekumirira kana, nekungo farira, mukana wekuti makomputa atipe Kushandura zvinyorwa kune odhiyo, kungave nekuiverenga kana kuishandura kuti ive faira yekuteerera kune inotevera, chinhu chinoshandiswa zvakanyanya.
Windows uye Android natively vane kugona kuverenga nemanzwi ayo, kunyangwe ivo vachichengetedza mamwe maitiro anoramba achitsanangura mavambo avo, anofadza nzeve.
Yakawedzerwa kune izvi zvakateedzana zvemahara uye zvakabhadharwa zvirongwa zvinonyanya kuita izvi zvinhu.
Mushure mekurangarira kuti Windows inobhadharwa uye Android inounganidza data yeGoogle, tinofanira kutaura kuti chiie Linux haisati yasvika par asi, tinogona kugona kuwana mhedzisiro inopfuura. Kune rimwe divi, kunyangwe paine sarudzo dzekutengesa-giredhi Linux (uye, chokwadika, iwe unofanirwa kubhadhara) mune ino chinyorwa ticha tarisisa pane emahara uye akavhurwa sosi sosi.
1 Zvishandiso zvekushandura mavara kuita kutaura
1.2 Espeak / Espeak NG
2 Pico Chinyorwa kune Inotaura Injini
Zvishandiso zvekushandura mavara kuita kutaura
Kana iwe ukashandisa iyo Caliber e-bhuku muoni, iwe uchaona kuti muLinux inokumbira iwe kuti uise package inonzi Speech-Dispatcher. Iyi sisitimu daemon inoshanda sechibatanidza pakati pezvirongwa zvinoda kushandura zvinyorwa kuita kutaura uye zvirongwa zvinobata kutaura kwekutanga.
Zvezvirongwa zvinokurukurwa muchinyorwa chino inoshanda naEspeak uye Mutambo.
Icho chishandiso chiri mune izvo zvinyorwa kuitira kuti iwe ugone kuzvitsvaga nemazita kuti uzviise kubva kumaneja wepakeji.
Espeak / Espeak NG
Kuti uedze inotevera mirairo, iwe unozofanirwa kugadzira iyo faira faira, nyora chimwe chinhu uye chengeta se test.txt
Espeak chinyorwa-kune-kutaura chinoshandiswa chinoshandiswa neyekuverenga zvishandiso maturu mazhinji eLinux kugoverwa saka unogona kuiisa kubva kune ayo ekuchengetedza. Iyo inoshandiswa zvese kubva pamutsetse wekuraira uye kuburikidza nezvirongwa zvine graphical interface senge Gespeaker kana Kmouth (ese ari muzvivakwa).
Mazhinji emanzwi anowanikwa muEspeak kurira robhoti, asi, ivo vanonyatsonzwisiswa uye, hapana chinotadzisa mashandisiro avo.
Espeak NG ndeimwe komputa vhezheni yeiyo yapfuura.
Kuti uchinje faira kubva pane zvinyorwa kuenda mukutaura
Spanish kubva kuSpain
espeak -f prueba.txt -v es -w prueba.wav
espeak -f prueba.txt -v es-419 -w prueba.wav
Rubatsiro uye rumwe ruzivo
Chimwe chishandiso chinowanikwa mune zvinyorwa ndeye Mutambo. Inosanganisira iwo mamwe maitiro eakare apfuura, kuwedzera kune mukana wekuverenga izvo zvatiri kunyora.
Tinogona kuona runyorwa rwemitauro yakaiswa ne:
festival --language castillian_spanish --tts prueba.txt
Izwi rekupedzisira muchiSpanish rakajeka, kunyangwe robhoti, asi rine matambudziko nema diphthongs. Mutambo haugadzire odhiyo mafaira.
Pico Chinyorwa kune Inotaura Injini
Iyo yekutaura synthesizer yeakavhurika sosi vhezheni yeApple. Izwi iri rakanyanya kusikwa, kunyangwe richiisa zvirambidzo pakureba kwechinyorwa. Unogona kuiwana mune zvinyorwa pasi pezita ibttspico-utils.
Kuti tishandure kubva pane zvinyorwa kuenda kuzwi faira tinoshandisa rairo:
pico2wave -l es-ES -w prueba.wav "$(cat prueba.txt)"
Tinogona kuwana rumwe ruzivo nekunyora:
Iri svondo inoshandisa raibhurari imwechete inoshandiswa neGoogle Dudziro kuratidza kududzwa kweshoko. Kunyangwe iri munzvimbo dzekuchengetera, zvinogona kudaro nekuti iri vhezheni yekare, haigone kutaurirana nemaseva eGoogle saka zvirinani kuiisa kubva kunzvimbo dzePyPy.org
Kune izvi isu tinofanirwa kuve nechokwadi kuti isu tine iyo python3-pombi package yakaiswa uye nekunyora:
sudo pip3 install gTTS
Ipapo tinoita zvinotevera:
sudo nano ~/.profile
Uye isu tinowedzera uyu mutsetse
Isu tinoponesa ne CTRL KANA uye tinoponesa ne CTRL X
Tinogona kuona mitauro iriko nekutaipa
Kuti tishandure (mune ino kesi mp3) faira remavara, tinoita:
gtts-cli -f prueba.txt --l es --output test.mp3
Google inoisa miganho pakushandisa kwatingaite muchirongwa, asi ini ndakakwanisa kuburitsa mafaera anosvika kweawa yakareba.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Chinja mavara kuti ataure. Dzimwe nzira dzeLinux
Windows 11 uye bhizinesi. Iko kubwinya kweLinux kuri kuuya kudesktop?
Rhyme, minimalist mutambi ane interface inoyeuchidza chaizvo Apple